I-Hydrogen Facts - Element 1 okanye H
I-Hydrogen Iinkcukacha kunye neZakhiwo
I-Hydrogen yinto yokuqala kwitafile zexesha . Le ngcaciso yecandelo le-hydrogen, kuquka iimpawu zalo kunye nezixhobo zomzimba, ukusebenzisa, imithombo kunye nolunye ulwazi.
Iimpawu zeHydrogen ezibalulekileyo
Le yitheyibhile yesikhephe yenkcazelo ye-hydrogen element. Todd Helmenstine
Igama le-Element: Hydrogen
I-Element Uphawu: H
Inombolo ye-Element: 1
I-Element Category: nonmetal
I-Atomic Weight: 1.00794 (7)
Uqwalaselo lwe-Electron: 1s 1
Ukufumanisa: I-Cavendish, 1766. I-Hydrogen yayilungiselelwe iminyaka emininzi ngaphambi kokuba ibonwe njengento ehlukileyo.
Igama elivela kuyo: isiGrike: i- hydro ithetha amanzi; iizakhi zentsingiselo ezenzayo. Isakhi saqanjwa nguLavoisier.
Hydrogen Properties Properties
Le vial ephethe i-hydrogen yegesi ephezulu. I-Hydrogen yi-gesi engenambala evuza i-violet xa iononized. I-Wikipedia Creative Commons License
Isigaba (@STP): igesi
Ubungakanani: 0.89888 g / L (0 ° C, 101.325 kPa)
I-Melting Point: 14.01 K, -259.14 ° C, -423.45 ° F
Indawo yokubilisa: 20.28 K, -252.87 ° C, -423.17 ° F
I-Triple Point: 13.8033 K (-259 ° C), 7.042 kPa
Iphuzu elibalulekileyo: 32.97 K, 1.293 MPa
Ukushisa kweFusion: (H 2 ) 0.117 kJ · mol -1
Ukufudumala kokutshatyalaliswa komhlaba: (H 2 ) 0.904 kJ · mol -1
I-Molar Heat Capacity: (H 2 ) 28.836 J-mol-1 · K -1
Umgangatho wezantsi: 2S 1/2
Ionization Ingenzeka: 13.5984 ev
Iimpawu zeeHydrogen ezongezelelweyo
Intlekele yeHindenburg - I-Hindenburg ekhutshwayo ishushu ngoMeyi 6, 1937 e-Lakehurst, eNew Jersey.
Ubushushu obucacileyo: 14.304 J / g • K
Amazwe okuxhamla: 1, -1
I-Electronegativity: 2.20 (i-Pauling scale)
Amandla eNkxaso: I-1: 1312.0 kJ · mol -1
I-Covalent Radius: 31 ± 5 pm
UVan der Waals Radius: i-120 ntambama
Ukwakhiwa kweCriststal: i-hexagonal
Ukuqhuba Ukushisa: 0.1805 Wm -1 · K -1
Isantya sesandi (igesi, 27 ° C): 1310 m · s -1
Inombolo yeRejista ye-CAS: 1333-74-0
Ukuqhuma kwe-Volcanic yeStromboli e-Itali. UWolfgang Beyer
I-hydrogen engundoqo yamahhala itholakala kwii-volcanic gases kunye nezinye iigesi zendalo. I-Hydrogen ilungiswa ngokuchithwa kwama-hydrocarboni ngokushisa, isenzo se-sodium hydroxide okanye i-potassium hydroxide kwi-aluminium electrolysis yamanzi, i-steam kwi-carbon carbon, okanye ukufuduka kwi-acids ngesinyithi.
NGC 604, ummandla we-hydrogen eononiweyo kwi-Triangulum Galaxy. I-Hubble Space Telescope, isithombe PR96-27B
I-Hydrogen yinto ebalulekileyo kunayo yonke indawo. Izinto ezinzima kakhulu ezivela kwi-hydrogen okanye kwezinye izakhi ezenziwe kwi-hydrogen. Nangona i-75% yendalo yonke yendalo i-hydrogen, loo nto ayinqabile kwiMhlaba.
I-Operation Ivy "Mike" yadutshulwa yinkampani ye-thermometer eyayixoshwa kwi-Enewetak ngo-Oktobha 31, 1952. Imfesane yesikhokelo sikaNational Security Administration / Nevada Site Office
Ushishino, ininzi i-hydrogen isetyenziselwa ukucwangcisa i-fuel fuels kunye nokwenziwa kwe-ammonia. I-Hydrojeni isetyenziselwa ukunyusa, i-hydrogenation yamafutha kunye namafutha, imveliso ye-methanol, i-hydrodealkylation, i-hydrocracking kunye ne-hydrodesulfurization. Isetyenziselwa ukulungiselela i-rocket fuel, ukuzalisa ibhaluni, ukwenza iifeliti zamanzi, ukwenza i-hydrochloric acid, nokunciphisa i-ores zensimbi. I-Hydrogen ibalulekile kwindlela yokusabela kwiprotton-proton kunye nomjikelezo we-carbon-nitrogen. I-hydrogen yotywala isetyenziswe kwi-cryogenics kunye ne-superconductivity. I-Deuterium isetyenziswe njengomculi kunye neyomodareyitha ukunciphisa i-neutron. I-Tritium isetyenziswe kwi-bhomu ye-hydrogen (fusion). I-Tritium isetyenziswe kwakhona kwiipende ezikhanyayo kwaye njengomculi.
Iprotium yiyona isotope eqhelekileyo ye-hydrogen element. Iprotium ineprotoni enye kunye ne-elektroni enye, kodwa ayikho i-neutron. Blacklemon67, i-Wikipedia Commons
Ama-isotopes amathathu ayenzeka ngokwemvelo e-hydrogen anegama lawo: iprotium (0 neutron), deuterium (1 neutron), kunye ne-tritium (2 neutron). Enyanisweni, i-hydrogen yiyona nto yodwa enegama lazo iisotop zayo eziqhelekileyo. Iprotium yindawo ephezulu ye-hydrogen isotopu. 4 H ukuya kwi- 7 H ziyi-isotop ezinokungaqiniseki kakhulu ezenziwe kwilebhu kodwa ezingabonakali kwindalo.
Iprotium kunye ne-deuterium ayinayo i-radioactive. I-Tritum, nangona kunjalo, ibola kwi-helium-3 ngokubola kwe-beta.
Eminye iHydrogen Facts
Le i-deuterium ioniweyo kwi-reactor i-IEC. Uyakwazi ukubona uphawu olubomvu okanye obomvu oluboniswa yi-deuterium eononiweyo. Benji9072
I-Hydrogen yinto elula kakhulu. Igesi ye-Hydrogen yinto elula kwaye ingavumelaniyo yokuba i-hydrogen engahlanganiswanga ikwazi ukuphunyuka emoyeni.
Igesi ye-Hydrogen ngumxube wee-molecular molecules, i-ortho- ne-para-hydrogen, eyahlukileyo ngamagqabha e-electron ne-nuclei. I-hydrogen eqhelekileyo kwiqondo lokushisa kwamanzi liqukethe i-25% ye-para-hydrogen kunye ne-75% ye-ortho-hydrogen. Ifom ye-ortho ayikwazi ukulungiswa kwimeko ecocekileyo. Iifom ezimbini ze-hydrogen ziyahlukahlula ngamandla, ngoko iimpahla zazo zihluka.
Igesi ye-Hydrogen iyatshisa kakhulu.
I-Hydrogen ingathatha inkokhelo engalunganga (H - ) okanye inkokhelo enhle (H + ) kwiimveliso. Iimveliso ze-Hydrogen zibizwa ngokuba ngama-hydride.
I-deuterium edibeneyo ibonisa uphawu olubomvu okanye olupinki.
Thatha i-Hydrogen Fact Quiz
Iinkcukacha ze-Neon - Ne okanye i-Element 10
Igalari yeGesi eyiNgcaciso
Flerovium okanye i-Ununquadium Facts - Fl Element 114
Iinkcukacha zeNiobium (iColumbium)
Rutherfordium Facts - Rf okanye Element 104
Indlela yokwenza isangqa Eyesibhozo kwiSikethi zesebe
I-American University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ixesha lenkomo: Drake Vs Tyga
Ingaba Umfazi Unamhlanje Uthobe I-Oscar kuMlawuli Olungcono?
Ifomu yeNgoma / yeChorus / iBridge Bridge
I-University of Radford i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Indlela yokulungisa i-Headlight Scratched okanye iLil Light Lens
Kwakuphi i-Golf eyayiqala iThelevishini?
Kutheni i-Han Han Solo ithi Yenze i-Kessel isebenze kwi-12 i-Parsecs?
'Iipaka kunye noLonwabo' Isikhathi 4 Isiqendu
U-Attila the Hun kwi-Battle of Chalons
Iimemesi zeMemes kunye neengcaphuno
Tashlich, iSithethe esiPhambili seRosh HaShanah
Ukudala i-Digital Scrapbook kwiKhompyutha yakho